संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले उठाए गोर्खाहरुको मुद्दा « Naya Page
संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले उठाए गोर्खाहरुको मुद्दा
प्रकाशित मिति : 27 September, 2018 7:07 pm
काठमाडौं, ११ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संसदमा गोर्खाहरुको मुद्दा उठाएका छन् । नेता नेपालले सरकारलाई गोर्खाहरुको मुद्दाका बिषयमा गम्भिर हुन आग्रह गरेका हुन् ।
विहिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेता नेपालले गोर्खाहरुको समस्या समधानका लागि सरकारलाई गम्भिर हुने आग्रह गरे । उनले भने ‘भुपु ब्रिटिस गोर्खाका समस्या समाधान गर्न ध्यान जाओस् ।’ नेपालले गोर्खाहरुको हकअधिकारको निम्ती निरन्तर आवज उठाउदै आएका छन् ।
नेता नेपाल परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला गोर्खाहरुलाई त्रिपक्षीय सम्झौता पनि उपलब्ध गराएका थिए । भारत, बेलायत र नेपालबीच भएको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षी सम्झौता प्राप्त नगर्दा गोर्खाहरुलाई आन्दोलनमा समस्या भएको थियो ।
बेलायतले सधैं भन्दै आएका थिए,‘हामीले त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा गोर्खाहरुलाई व्यवाहार गरेका हौं ।’ नेता नेपालले यो सम्झौता उपलब्ध गराएपछि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)लाई बेलायती अदालतमा मुद्दा हाल्न सजिलो भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ, रासस
यसैगरी नेता नेपालले विहिबारको बैठकमा ब्रिटिस सेनामा नेपाली महिलालाई पठाउने प्रसङ्ग आएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न अनुरोध गरे । उनले भने, आज ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन जाने कुरा उठिरहेको छ । भोलि खाडी राष्ट्रहरूले पनि भर्ना गर्नुपर्यो भन्ला । यस्तो अवस्था आउन नदिऊँ ।’
यसअघि बेलायतले एक तर्फी रुपमा नेपाली महिलाहरुलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
यसअघि बेलायतले एक तर्फी रुपमा नेपाली महिलाहरुलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने घोषणा गरेका थिए । दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि ब्रिटिस सेनाको अभिन्न अंग रहेको ‘ब्रिगेड अफ गोर्खाज’ मा बेलायतले नेपाली महिलालाई भर्ती गर्ने घोषणा गरे पनि नेपाल भने बेखबर छ । २०२० को वसन्त ऋतुसम्म नेपाली महिलालाई ब्रिटिस सेनामा अवसर प्रदान गर्न लागिएको हो ।
ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा सैनिक संख्या न्यून हुँदै जाँदा उक्त संगठन बलियो बनाउन महिलालाई पनि भर्ना लिने निष्कर्षमा बेलायत सरकार पुगेको बताइएको छ । १८१६ मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाली पनि ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन थालेका हुन् ।
विहिबार नै गेसोका सभापति कृष्णकुमार राई सहितको टोलीले नेता नेपाललाई भेटेर गोर्खा आन्दोलनको बिषयमा जानकारी गराएका थिए । भेटमा नेता नेपालले गोर्खाहरुको अधिकार प्राप्तका लागि पहल गर्ने बताएका थिए ।
नेकपाको कार्यक्रममा भिम रावलको ‘क्रेज’
बुढेसकालमा १६ वर्ष कान्छीसँग विवाह, नातिनातिना बने हजुरबाको जन्ती
फाजिलका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने, कति छन् फाजिल कर्मचारी ?
सरकारी कर्मचारीहरूलाई खुशीको खबर, भत्ताका लागि थपियो ६ अर्ब रकम
मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो यस्ता १२ निर्णय (सूचीसहित)
कर्मचारीलाई खुशीको खबर, मन्त्री पण्डितले भने, ‘कर्मचारी समायोजनको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ’
नेपालको पहिलो भू-उपग्रह यसरी गरियो प्रक्षेपण (हेर्नुस पूरा भिडियो)
सरकारले गर्‍यो सहकारीको व्याजदरमा नियन्त्रण, अब यी कुरा पालना गर्नुपर्ने
शिक्षण गर्नु हुन्छ ? तपाईसँग यी १५ बुंदा छन् ?
सबैभन्दा छिटो गोल गरेर साउथ ह्याम्पटनका शेनले रचे कीर्तिमान
काठमाडौं, ११ बैसाख । इंङ्गलिस प्रिमियर लिग फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा छिटो गोलको कीर्तिमान बनेको छ
डडेल्धुरामा बस दुर्घटना : ६ जनाको मृत्यु, २६ घाइते
डडेलधुरा, ११ बैसाख । डडेल्धुराको भिमदत्त राजमार्गको साउखर्कमा बस दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको
नेकपाका ५३ नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी, को-को हुन् ती नेता ?
काठमाडौं, ११ बैसाख । नेकपाका ७७ जिल्ला अध्यक्ष र सचिव बनाइएका १५४ जना नेतामध्ये ५३
‘हामी लाहुरेहरु भूपीको चेसका गोटी जस्तै भयौं’
काङमाङ नरेश राईको परिचय अनेक छ । उनी अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिक हुन् । एउटा
बेलायतद्धारा गोर्खाहरुको लागि एकतर्फी ‘प्याकेज’ घोषणा, गोर्खाहरु असन्तुष्ट
काठमाडौं, २३ फागुन : बेलायत सरकारले आन्दोलनरत अवकास प्राप्त गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधनको निम्ती एकतर्फी
मार्क्सले जंगबहादुरलाई किन भने, ‘बेलायती कुकुर’ ?
मार्क्सको बेलायती कुकुर जंगबहादुर र गोर्खा आन्दोलन कार्ल मार्क्सले आफ्नो डायरीमा जंगबहादुर राणालाई बेलायती कुकुर
बागबजार काठमाडौँ, नेपाल